WHO oo joojisey baaritaanka Daawada Hydroxychloroquine - Horseed Media • Somali News
WHO oo joojisey baaritaanka Daawada Hydroxychloroquine
Dalal dhawr ah ayaa dawooyinka Malaariyada u isticmaalay in lagu daaweeyo cudurka COVID-19 ee Fayraska Korona, laakiin sida lagu sheegay daraasad cusub, daawada Malaariyada ayaa kor u qaadi karta khatarta in loo dhinto haddii qofka uu haleelo Fayraska Korona. Haddaba, Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu joojinayaa baaritaanka caafimaad ee lagu hayey daawada malaariyada in loo isticmaali karo COVID-19.
WHO waxay tixraacaysaa daraasad cusub oo lagu daabacay jariidada The Lancet maalintii Jimcada ee la soo dhaafay. Marka loo eego daraasadda, daaweynta covid-19 oo leh Hydroxychloroquine ama chloroquine waxaa lala xiriirin karaa dhimashada sii kordheysa.
Sidaas darteed, WHO waxay joojineysaa dhammaan tijaabooyinkeedii caafimaad oo bukaannada lagu daaweeyo daawada duumada, iyadoo dib u fiirineysa dhammaan xogta laga helayo gudaha.
Arintaas waxaa shaaciyay madaxa WHO Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus shir saxaafadeedkiisi maalinlahaa ee ku saabsan faafitaanka Korona.
Walaacani wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka hydroxychloroquine iyo chloroquine ee covid-19. Waxaan gebi ahaanba joojiney tijaabooyinka daawooyinka Malaariyada iyo isnidaamiska in loo isticmaalo daaweynta COVID-19.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo Madaxweynaha Brazil Bolsonaro ayaa ku dooday in la isticmaalo daawada Malaariyada.
Toddobaadkii hore, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu liqo maalinkasta hal xabbo oo ah hydroxychloroquine ujeeddaduna tahay in uu ka hortago Fayraska Korona.
“Waxaan qaataa hal kaniini maalintii, ma jirto wax aan ku khasaarayo oo iga dhumayo haddii aan sidaas yeelo” ayuu yiri xilli uu shir jaraa’id qabtay, waxaana cilmibaarayaal badan shaki ka muujiyeen hadalkiisa oo ay u arkeen fariin uu dirayo in dadku isticmaalaan daawo aan tijaabo sax ah haysan. Dhowr maalmood ka dib Donald trump wuxuu ku dhawaaqay inuu joojinayo qaadashada daawada.